Otu esi eme kalịnda ọdịnaya ire vidiyo | Martech Zone
N'izu gara aga, otu n'ime ọrụ m nyefere bụ nyocha njikarịcha ekwentị maka onye ahịa. Ọ bụ ezie na ha na-eme nke ọma na nyocha desktọpụ, ha na-adaba na ọkwa ekwentị na ndị asọmpi ha. Ka m na-enyocha saịtị ha na saịtị ndị asọmpi ha, otu ọdịiche dị na atụmatụ ha bụ ịre ahịa vidiyo.
Ihe karịrị ọkara nke nlele vidiyo si na ngwaọrụ mkpanaka.
Usoro a nwere ọtụtụ akụkụ. Ndị ahịa na azụmaahịa na-eme nyocha na nyocha site na ngwaọrụ mkpanaka. Vidiyo bụ usoro mgbasa ozi zuru oke:
YouTube na-aga n'ihu na-abụ igwe nchọta nke abụọ kachasị ukwuu, yana ọtụtụ vidiyo na-ekiri site na ngwaọrụ mkpanaka.
YouTube bụ isi iyi nke njikọ azụ na ọdịnaya saịtị gị ma ọ bụrụ na ị A na-emezi ọwa YouTube na vidiyo ọ bụla ọma.
Ibe mkpanaaka gị, n'agbanyeghị nkọwa zuru oke ma na-enye nkọwa, nwere ike kpalite njikọ aka na vidiyo na-enyere aka na ya.
N'ezie, ịzụlite a Ọbá akwụkwọ ọdịnaya nke vidiyo chọrọ usoro ọrụ site na echiche site na njikarịcha. Na usoro vidiyo gị nwere ike ịgụnye ọtụtụ ụdị vidiyo iji kọọ akụkọ ika gị nke ọma. Kalịnda gị ekwesịghị ịbụ naanị isiokwu na ụbọchị bipụta, ọ kwesịrị ịgụnye usoro ọrụ niile, gụnyere:
Ụbọchị ekwesịrị ịse vidiyo gị, megharịa, dezie, mepụta, bipụta na ịkwalite ya.
Nkọwa nke nyiwe ebe ị ga-ebipụta vidiyo gị.
Nkọwa na ụdị vidiyo, gụnyere nkenke ụdị esi anwụde site n'ụzọ zuru ezu ka esi eme.
Ebe ị nwere ike itinye ma kwalite vidiyo gị, gụnyere mkpọsa ndị ọzọ nwere ike itinye ya.
Otu ị ga-esi tụọ mmetụta vidiyo na ahịa gị n'ozuzu ya.
Dị ka ọ dị na mkpọsa ahịa ọ bụla, m ga-eji a ezigbo ndepụta iji hazie wepụta echiche gị ka ị nwee ike ịbawanye mmetụta nke ahịa vidiyo gị. Ọ bụ ezie na vidiyo nwere ike ịchọ ụfọdụ ihe mgbakwunye na oge na ego, ụgwọ ọrụ vidiyo dị oke mkpa. N'ezie, m ga-arụ ụka na ị na-efunahụ akụkụ dị ịrịba ama nke ndị ahịa gị site na itinyeghị vidiyo n'ime atụmatụ ịzụ ahịa gị n'ozuzu ya.
Na ihe omuma a, Otu Mmepụta na-agafe ihe niile ịchọrọ ịma gbasara otu esi eme atụmatụ na hazie ọdịnaya vidiyo gị na kalenda ọdịnaya. Ha na-akọwa ka iji kalenda ọdịnaya nwere ike isi nyere aka melite arụmọrụ nke ọdịnaya vidiyo gị. Enwekwara ụfọdụ nghọta kachasị elu sitere n'aka ndị isi ụlọ ọrụ gbasara otu usoro si bụrụ isi maka ịga nke ọma nke atụmatụ ịre ahịa ọdịnaya gị.
Tags: otúinfographicotu iheọdịnaya vidiyokalenda ọdịnaya vidiyoatụmatụ ọdịnaya vidiyoahịa vidiyovideo ahịa infographicusoro mgbasa ozi vidiyo